'मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यकता हेरेर गरिन्छ' –प्रधानमन्त्री ओली - समय-समाचार
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यकता हेरेर गरिन्छ’ –प्रधानमन्त्री ओली
समय-समाचार सोमबार, २०७७ भदौ १५ गते, ०६:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, भदाै १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको विवाद मिलिसकेको बताएका छन् ।प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुनै विवाद बाँकी नरहेको बताए । झण्डै डेढ घन्टा लामो अन्तरवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयबस्तु, सरकारका कामलगायतमा महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गरेका थिए ।
प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्रीले दिएको अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ
कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु !
अहिले दुई अध्यक्ष प्रचण्डजी र म, जुन कतिपय समस्याहरु देखा परे, बीचमा कतिपय अस्वस्थताहरु पनि देखा परे र अलिक जग हसाइका कामहरु पनि विभिन्न कारणले भए । हाललाई त्यसमा को दोषी, को निर्दोष त्यो करार गर्नेतिर भन्दा समीक्षा गर्दै जाउँला । हामी हरेकले आत्माआलोचक भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, कसैलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा र एकताको बाटोतिर फर्कौं भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । र, उहाँ र मैले एकताबद्ध ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जान, एकता एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउन, देशमा स्थिरता–स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, कोभिड १९ सँग प्रभावकारी ढंगले लड्न, अहिले देखा परिरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरुसँग लड््न र सरकारका नियमित कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जाने भन्ने सहमति ग¥यौं । त्यस सहमतिलाई कसरी अगाडि जाने त ? त्यसका आधारहरु कस्ता हुन सक्छन् ? हामीले आफ्ना रायहरु पनि बनायौं । र, ती रायहरुलाई व्यवस्थित गर्न हामीले कार्यदल गठन ग¥यौं र हामीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि खासगरी दुई अध्यक्षलाई एकताका यी प्रयासहरुमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने ? यो फाटोतर्फको प्रयास होइन, यात्रा होइन ।
– तपाईंलाई एउटा कुरा बताऔं । मैले पद्धति उल्लंघन गरेकोे कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन । पद्धतिसम्मत ढंगले सबै चल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । अब अहिले पद्धतिको बहस गर्न थाल्ने हो भने वातावरणलाई जसरी हामीले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन खोजेका छौं, त्यसमा सहयोग नपुग्न सक्छ । त्यसमा म यो च्याप्टर (विषय) ओपन(खुला) गर्न चाहन्नँ । प्रक्रियासम्मत ढंगले, विधिसम्मत ढंगले, अनुशासित ढंगले पार्टी चल्नुपर्छ ।
पार्टी भनेको विचारबाट निर्माण हुने हो । विचारबाट संगठन निर्माण भइसकेपछि त्यो विचारका आधारमा त्यो संगठन संचालन र परिचालनका विधि प्रक्रियाहरु हुन्छन् । ती विधि प्रक्रियाहरुअनुसार संगठन चल्नुपर्छ । अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीको विचार विपरितका अभिव्यक्तिहरु र कमिटीमा अभिव्यक्ति राख्नेभन्दा पनि संचार माध्यमहरुमा अभिव्यक्ति छरेर र सभ्यताका सीमाहरु नाघेर बोल्ने खालका परिपाटीहरु ती विधि, पद्धति प्रक्रिया कुनै पनि सम्मत हुँदैनन् । त्यसकारण त्यस्ता कुराहरु कसैले गर्नुहुँदैन । गुटबन्दी पार्टीमा गर्नुहुँदैन । गुटका बैठक र भेलाहरु गर्नुहुँदैन । यी सबै कुराहरु उचित होइनन् । र, अब त्यस्तो बाटोबाट होइन, ठीक विधि प्रक्रियासम्मत बाटोबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
– भयो । अब असम्झदारी छैनन् । मनमनै हात मिलाउने भन्नु हुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ, तर सोझैचाहिँ मिलाउन मिल्दैन ।
– मन्त्रिपरिषद्को गठन-पुनःगठन आवश्यकताले गरिने हो । त्यो म हेर्दै छु, विचार गर्दैछु र समीक्षा पनि गर्दैछु । मुख्य रुपमा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो । पुराना साथीहरुको टिम लिएर सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ वा त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशीलता र सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो यो । म यसमा विचार गरिराखेको छु ।
– नेपालमा मात्रै यस्तो हुन्थ्यो भने त विरोधीहरु चम्किएर बस्नुखानु हुँदैनथ्यो । तर यो विश्वव्यापी रुपमा, महामारीको रुपमा आएको अत्यन्तै घातक र संक्रामक रोग कोभिड–१९, जसले मानव जातिको भविष्यलाई हल्लाइदिएको छ । आज मानव जीवनलाई थर्कमान बनाएको छ । आज अर्थतन्त्रलाई बहुतै गम्भीर समस्यामा हालेको छ । र, यसले भविष्यमा कस्तो रुप लिन्छ ? त्यो अझैं टुंगो लागिसकेको छैन । यसको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ? यो अझै टुंगो लागिसकेको छैन । जनतामा सचेतनता जगाउने कुरामा जोड दिन छाडेर यहाँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरु परिवर्तन गरी केही हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर के छ ? सरकारले जे कदमहरु जे चालिराखेको छ, ती सरकारका लागि चालिराखेको छ कि आफ्नो जीवन रक्षाका लागि हो ? जनताले यति बुझेका छन् । एउटा हिस्सा छ त्यस्तो बहस गर्न रुचाउने पनि छ । तर सबैले त्यस्तो ठानेका छैनन् । एउटा हिस्साले चाहिँ आफ्नो लागि सरकारले यो सारा गरिरहेको छ भन्ने कुरासम्म बुझिराखेको छैन । सरकारका प्रयासहरु केही पनि नभएको, तयारी केही पनि नभएको ठाउँमा अहिले हामी २३-२४ हजार पीसीआर टेस्ट प्रतिदिन गर्न सक्छौं, यो सानो कुरा होइन ।
एक हजारलाई संक्रमण भयो । १ हजार ५ सयलाई संक्रमण भइराखेको छ प्रत्येक दिन भने अब भोलि प्रत्येक दिन २ हजार, ५ हजार र १० हजारलाई संक्रमण भयो भने त्यसको लागि अहिलेकै सम्पूर्ण संरचना ठीक छ कि यो संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ?
– म सोध्दै छु नि ! मैले कुनचाहिँ आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेँ ? सम्धी हुनुअघिकै प्राध्यापक डाक्टर
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ भदौ २०७७ मा प्राइम टेलिभिजनकालागि ऋषि धमलालाई ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा दिएको अन्तवार्ता)